Natural Cosmetics | Cosmetics & Wellness | Mapeji evaravara ehurukuro
Kuchengetedza kwetsika kubva pamusoro kusvika kunezvigunwe
Runako kubva mumasikirwo anogadzirwa nemasikirwo echisikiro mumhando yezvigadzirwa zvepanyama. Izvi hazvisi kungopa pfungwa yekugara zvakanaka, asiwo hazvina kukuvadza nemishonga inoshandiswa. Chido chekugara kwezvinhu zvakasikwa, kwakagadzikana uye hupenyu huri kukura, saka zvipfeko zvepanyama zvinowedzera zviripo uye zvinozivikanwa.
Zvimwe zvipfeko zvepanyama hazvisarondedzwi nemutemo uye naizvozvo hapana yunifomu yemhando yakasimbiswa. Iko kune dzakawanda zvezvinyorwa zvezvinyorwa zvezvinyorwa kubva kumhizha iri kutsausa paunenge wazvitenga. Kunyange zvakadaro, zvimwe zvivimbiso zvakavimbika zvakasikwa munguva. Izvozvi zvigadzirwa zvino kubva pakuchengetwa kwezvinhu zvakagadzirwa kushandiswa kwezvinhu zvakasikwa. Nokudaro, iwe unogona kuona zvipfeko zvepanyama kamwechete pachisimbiso.
Asi zvinosuruvarisa, hapano chete chisimbiso. Izvozvo zvinoita kuti zvinyanye kuoma. Zvisinei, iwe unogona kufunga kuti zvinhu zvose zvinoshandiswa zvakabva pane zvigadzirwa zvine zvisimbiso kubva pane zvakasikwa. Mafuta, waxes, anonhuwirira, madhayi uye zvinonhuwirira vanogona chete kuitwa kubva chicherwa, muriwo, uye kunze shoma, kubva mhuka mbishi zvinhu. Tabu muri paraffins, silicones, mhuka kunovhenekwa uye radioactive nemwaranzi. Zviratidzo zvehutano zvinosanganisira "NaTrue", "Controlled Natural Cosmetics" uye "EcoCert".
Runako kubva pane zvakasikwa hutano
Muzvimwe zvipfeko zvinokonzerwa nezvinhu zvinokonzera hutachiona zvinogona kukonzera madhara uye kunyange zvirwere. Muchidimbu chinotenderwa, zvinhu izvi hazvina maturo. Asi vatsoropodzi vanoti mumwe haazivi kuti zvinhu zvinogadziriswa sei nemimwe michina yakashandiswa. Muzvipfeko zvepanyama, izvi zvinopesana zvinorambidzwa. Asi kunyange zvipfeko zvepanyama zvine mafuta anonyanya kukosha anogona kukonzera mishonga. Naizvozvo hakuna munhu anokwanisa kuratidza kuti zvipfeko zvechisiki kana zvipfeko zvinowanzoita zviri nani.
Zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvezvipfeko zvepanyama
Muzvipfeko zvechisikigo, kune zvose zvigadzirwa izvo munhu anozviziva uye anoda. Izvi zvinosanganisira kutarisa chiso uye ziso, kutarisa bvudzi, kugadzirisa uye kugadzirisa miromo, kuchenesa muviri, sese, maoko ekisi, kutarisira kwezuva nezvimwe zvakawanda.
Kunyanya chirwere chedu chinoda kunyatsochenjerera uye kuchengetedza zvinyoro. Inoratidzirwa zuva nezuva kune zvinokuvadza zvakatipoteredza. Ganda rinobvisa zvinhu zvose uye rinovatumira kune mukati memuviri. Zvinyorwa zvinokonzera mishonga inogona kukuvadza ganda. Zvimwe zvipfeko zvakasikwa, kune rumwe rutivi, kutsigira nekuvandudza ganda redu uye kuita kuti rive rakanaka uye rakanaka.
Zvigadzikane nekunaka kwezvakasikwa. Inonyanya kufarirwa zvipfeko zvepanyama sechipo uye chimwe chinhu chakakosha zvikuru.
Kukanganisa kwezvimwe zvipfeko zvepanyama
Muzvipfeko zvepanyama zvinowanikwa mushure mekunge muscara inogara kwenguva refu kana isina mvura. Kunyange sunscreens ine zuva rinochengetedza zuva pamusoro pe20 kana kuti miromo yakajeka iwe uchatsvaga pasina. Kushambidza gels uye shampoos zvinenge zvisina kupisa uye bvudzi mapiritsi hazvigoni kugoverwa zvakanyanya. Silicones uye mapfupa dzimwe nguva zvinowedzera kuipa. Kunyange ruvara rwebvudzi rwepanyama haruna kukanganisa, vhudzi rakachena harisi kunyangarika zvachose uye bvudzi rinopenya muvara hazvibviri.
Vashandi vanowedzera vanoda kutarisirwa kwepanyama uye vanoshandiswa kune zvigadzirwa zvezvinhu zvinokonzerwa nemiti. Ganda redu rinoda kutarisirwa zvinyoro uye zvakasununguka kubva kune zvisikwa zvepanyika. Munguva iyo, makambani mazhinji anopa zvipfeko zvepanyama uye inoenderera mberi inoenderera mberi.
Kuchengetedza kwepanyama nekodonti mafuta
Zvigunzva zvepanyama zveganda rakanaka
Kokoti mafuta yakafuma uye inopa huzhinji hunyoro. Izvi zvakakosha zvikuru kune vhudzi. Sezvakaita bvudzi remuviri, rinogona kushandiswa kune vhudzi kana rakaumbwa. Kuti unyungudzwe iwe unogona kuiswededza kune mumwe nemumwe nemaoko ako. Zvakanakisisa kusiya mafuta ekokoni mumavhudzi kwemaawa mashomanana. Iyo yakareba nguva yekudzikinura, zviri nani kuitika pashure pekuchengeta.
Mushure mekunyatsoonekwa, bvudzi rinofanira kunge rakanyatsocheneswa kuitira kuti rirege kunzwa hutyu zvakare. Zvisikwa zvakachena uye zvisingasviki bvudzi zvichava mugumisiro. Imba inopisa inogona kushandiswa chete kune vhudzi, inobatsirawo ganda. Nokuti kutarisira antibacterial properties kunozivikanwa uye kunofanirwa. Ikootikoni inogona kushandiswa mumuviri wose. Siso, miromo, maoko, tsoka, muviri wose uchanzwa unofadza pashure pekutarisira uye kunhuhwirira kwazvo. Nhengo dzomuviri dzinonyanya kuomeswa dzichikurumidzika dzive dzakanyorova uye dzinofarirazve Economical inofanira kuva nekushandiswa kwemafuta pane girasi ganda.
Ikokodhi mafuta ndeyekuchengetedza kwepanyika kubva pamusoro kusvika kunezvigunwe. Inogona kushandiswa kumunhu wose, saka inowanikwawo zvikuru.
Tenga iyo kona kokonati yakanaka
Iwe unogona kutenga kokonati mafuta mune zvoutano zvekudya zvekudya uye zvinodhaka. Paunenge uchitenga, unofanirwa kuve nechokwadi chokuti hauna mahwanda.
Kuchengetedza kwezuva nezuva kweganda kunowanzotanga nekunama muviri. Muviri wezvokudya muzvipfeko zvepanyama zvine zvigadzirwa zvakadai samafuta e soybean, shea butter uye almond maori. Ganda racho rinogadziriswa nemusikirwo wemusikirwo kwenguva yakareba. Kuchengetedza kwakanyanya uye zvakanyanya kunodzivirira ganda zvinopiwa nemavitamini C uye E.
Kana ganda racho rakaoma kwazvo, zviri nani kushandisa muviri.
Nokuti ganda rakaoma uye muviri bhotela rave rakataridzirwa. Iyo ine maMacadamianus mafuta, anogadzira ganda uye anopa nzvimbo dzakaoma dzine lipidha zvakakwana. Nokushandisa zvinhu zvekuda kwemaruva, kusvibiswa kwehutanda kweganda kunosimudzirwa uye ganda rinodzivirirwa.
Chivara chisina kukwana chinoda kubuda kwekugara kwenguva dzose. Nokuti dzinongoitika hanya zvinogona kushandiswa nedzimwe algae, zvivako zviri yomugungwa zvicherwa uye mishonga glycerin unyoro murau.
Kuchengetedza kwepanyama kuri kuwedzera kukurumbira. Icho chiri chitubu chevechidiki mumuviri uye paganda.